ထွန်းထွန်းမင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
Maung Tun Tun Min
(1992-10-04) အောက်တိုဘာ ၄၊ ၁၉၉၂ (အသက် ၂၇)
၈၀ kg (၁၈၀ lb; ၁၃ st)
Fit & Fight Fitness & Lethwei, Yangon
၂၀၀၂ - လက်ရှိ
မသဲပွင့်ဖြူ (m. ၂၀၁၅)
ဦးထွန်းထွန်းဇော် (ဖခင်)၊ ထွန်းမင်းလတ်၊ ထွန်းမင်းနိုင်၊ ထွန်းမင်းအောင် (ညီအစ်ကိုများ)
၂၀၁၃ နေပြည်တော် Event
၂၀၁၃ အင်ချွန်း၊ ကိုရီးယား Event
အာရှ မွေ့ထိုင်း ချန်ပီယံရှစ်
၂၀၁၂ ဟိုချစ်မင်းစီးတီး၊ ဗီယက်နမ် Event
၂၀၁၀ ရန်ကုန် Event
ထွန်းထွန်းမင်း (၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ၊ ၄ ရက်နေ့ဖွား) သည် မြန်မာလူမျိုး လက်ဝှေ့အားကစားသမားတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ထွန်းထွန်းမင်းသည် အလွတ်တန်းကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ ဖြစ်သည်။ ထွန်းထွန်းမင်းသည် လက်ဝှေ့ရွှေခါးပတ်ကို ရယူခဲ့သည့် အငယ်ဆုံးသော လက်ဝှေ့သမားတစ်ဦး ဖြစ်ပြီး အသက် ၂၁ အရွယ်တွင် လက်ဝှေ့ရွှေခါးပတ်ကို ရရှိခဲ့သည်။ သူသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြင်ပ အခြားသောနိုင်ငံများတွင် ကျင်းပသည့် ပွဲများတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းဖြင့်လည်း လူသိများသည်။ သူသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ် အာဆီယံမွေထိုင်းချန်ပီယံပြိုင်ပွဲ၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ် အရှေ့တောင်အာရှအာဆီယံဂိမ်းနှင့် 2013 Asian Indoor and Martial Arts Games ပြိုင်ပွဲများတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။
၃ ရရှိခဲ့သည့် ဆုများ
၆ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် လက်ဝှေ့ကစားခြင်း မှတ်တမ်း
၈ MMA ပြိုင်ပွဲမှတ်တမ်းများ
ထွန်းထွန်းမင်းကို မွန်ပြည်နယ်နှင့် ဝေးကွာသည့် ရွာတစ်ရွာမှ မွေးဖွားခဲ့သည်။ မွန် လူမျိုး ဖြစ်သည်။ သူ၏ မိဘနှစ်ပါးမှာ ဦးထွန်းထွန်းဇော်နှင့် ဒေါ်အေးဝင်း ဖြစ်သည်။ သူသည် ဒုတိယမြောက်အကြီးဆုံးသား ဖြစ်သည်။ ထွန်းထွန်းမင်းသည် သူ၏ လက်ဝှေ့ပွဲများကို မွန်ပြည်နယ်တွင် စတင်ခဲ့သည်။ သူသည် အသက် ၆ နှစ်သားအရွယ်တွင် ဖခင်ဖြစ်သူက ဝယ်ယူခဲ့သည့် သဲအိတ်များ၊ အခြားအခြေခံပစ္စည်းများဖြင့် လေ့ကျင့်ခဲ့သည်။ စတုတ္ထတန်းရောက်သည့် အသက် ၉ နှစ်အရွယ်တွင် သူသည် ကျောင်းတွင်းကျင်းပသည့် ပြိုင်ပွဲတွင် အနိုင်ရခဲ့သည်။
၆ တန်းသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည့်အခါ ထွန်းထွန်းမင်းသည် လက်ဝှေ့ကို အာရုံစိုက်နိုင်ရန်နှင့် မိသားစုကို ထောက်ပံ့ရန် ကျောင်းထွက်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၉ ခုနှစ်အထိ ထိုင်းနိုင်ငံရှိ နာနတ်သီးခြံတွင် လိုအပ်သည့် ဝင်ငွေများ ရရှိရန် အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် သူ၏ သူဌေးဖြစ်သူသည် ရွာအတွင်းရှိ အခြားသော မွေထိုင်းကစားသမားယောက်ျားလေးများနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ရန် စိန်ခေါ်ခဲ့သည်။ ထွန်းထွန်းမင်းသည် ထိုယှဉ်ပြိုင်မှုတွင် အနိုင်ရခဲ့သည်။
ထွန်းထွန်းမင်းသည် နေအိမ်သို့ ပြန်လာသည့်အခါတွင် မုဒုံသားလက်ဝှေ့ကလပ်နှင့် ဆက်သွယ်ခဲ့သည်။ မုဒုံသားလက်ဝှေ့ကလပ်သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်ဆရာဦးရဲသွေး၊ ဦးသမိန်သော်တာနှင့် ထွန်းထွန်းမင်း၏ ဖခင်ဖြစ်သူတို့ တည်ထောင်ခဲ့သည့် လက်ဝှေ့ကလပ် ဖြစ်သည်။
သူ၏ နည်းပြဆရာအသစ်များ၏ လမ်းညွှန်မှုအောက်တွင် ထွန်းထွန်းမင်းသည် သူ၏ ပရောက်ဖက်ရှင်နယ် လက်ဝှေ့ကစားသမားဘဝကို စတင်ခဲ့သည်။ လက်ဝှေ့ပွဲများကို ဘုရားပွဲများနှင့် အခြားယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာ ပွဲတော်များတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။
ထွန်းထွန်းမင်းသည် အင်တာဗျူးများတွင် သူ၏အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ်တွင် အနားယူရန် စီစဉ်ထားသည်ဟု ထုတ်ဖော်ပြောခဲ့သည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့၊ အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ်တွင် ထွန်းထွန်းမင်းသည် စောငမန်းကို အနိုင်ယူပြီး အလွတ်တန်းကမ္ဘာ့လက်ဝှေ့ချန်ပီယံ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ စောငမန်းသည် ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲအတွက် ထွန်းထွန်းမင်းနှင့်အတူတူ လေ့ကျင့်ခဲ့ဖူးသည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ် ဒဂုံရွှေအောင်လံအထူးဆု (Trophy)
၂၀၁၄ ခုနှစ် အလွတ်တန်းလက်ဝှေ့ချန်ပီယံ (Title)
၂၀၁၅ ခုနှစ် သင်္ကြန်လက်ဝှေ့ချန်ပီယံ (ခါးပတ်)
၂၀၁၅ ခုနှစ် အကောင်းဆုံးလက်ဝှေ့သမားဆု (Trophy)
၂၀၁၆ ခုနှစ် အလွတ်တန်းမြန်မာ့လက်ဝှေ့ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဆု (ခါးပတ်)
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် လက်ဝှေ့ကစားခြင်း မှတ်တမ်း[ပြင်ဆင်ရန်]
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် လက်ဝှေ့ကစားခြင်း မှတ်တမ်း
44 wins,3losses, 16 draws
ရက်စွဲ ရလဒ် ပြိုင်ဘက် ပြိုင်ပွဲ နေရာ ကစားနည်း ပွဲချီ အချိန်
2019-03-31 Win Thaneelek Lookkromluang Lethwei Nation Fight Yangon, Myanmar KO 4
2018-12-16 Draw Dave Leduc 2018 Air KBZ Grand Final Myanmar Championship Yangon, Myanmar Draw 5
2018-08-19 Draw Daryl Lokuku 2018 Myanmar Lethwei World Championship Yangon, Myanmar Draw 5
2018-07-22 Draw Saiyok Pumpanmuang 2018 Golden Belt Championship Yangon, Myanmar Draw 5
2017-03-03 Win Nicholas Carter WLC 1: The Great Beginning Yangon, Myanmar TKO 1 2:59
2016-12-11 Loss Dave Leduc 2016 Air KBZ Aung Lan Championship Yangon, Myanmar TKO (Injury)32:34
Lost Openweight Lethwei World Championship Title
2016-10-27 Win Adem Yilmaz Lethwei GP in Japan 2016 Tokyo, Japan KO 5
2016-10-09 Draw Dave Leduc GTG International Challenge Fights 2016 Yangon, Myanmar Draw 5
2016-08-21 Win Choo Thai 2016 Myanmar Lethwei World Championship Yangon, Myanmar KO 1
Wins Openweight Myanmar Lethwei World Championship belt
2016-04-02 Win Ludwik Dokhoyan Max Thingyan Fight Yangon, Myanmar KO 1
2016-02-23 Win Evgeni Klimin Thaung Pyin Challenge Fights Ye Township, Myanmar KO 2
2016-02-04 Win Tolipov Mansurbek Win Sein Taw Ya 2016 Mudon Township, Myanmar KO 2
2016-01-17 Win Saw Gaw Mu Do Challenge to Myanmar Champion! Yangon, Myanmar KO 2
2015-12-20 Win Cyrus Washington 2015 Air KBZ Aung Lan Championship Yangon, Myanmar KO 1
2015-10-11 Win Daniel Kerr Who is the BEST? Yangon, Myanmar KO 2
2015-08-30 Win Jackson Alves de Souza All Star Big Fight Yangon, Myanmar KO 1
2015-04-11 Win Cyrus Washington Thingyan Fight 2015 Yangon, Myanmar KO 5
Wins Thingyan Fight belt
2015-03-29 Win Petchmuengkorn One On One Myanmar-Thai Challenge Fights Yangon, Myanmar KO 3
2015-03-04 Win Khasaroeng Kyaik Kay Lar Tha Challenge Fights Lamaing Township, Myanmar KO 4
2015-02-04 Draw Berneung Topkingboxing 68th Mon National Day Ye Township, Myanmar Draw 5
2015-01-15 Win Dimitri Masson Win Sein Taw Ya 2015 Mudon Township, Myanmar KO 2
2015-01-05 Win Teerapon Hnit Kayin Challenge Fights Ye Township, Myanmar KO 4
2014-12-07 Loss Cyrus Washington 2014 Air KBZ Aung Lan Championship Yangon, Myanmar KO 3
2014-11-02 Win Matthew Richardson One on One International Challenge Fight Yangon, Myanmar KO 3
2014-09-21 Win Saw Nga Man Who is Number One? Yangon, Myanmar TKO 4
Wins Openweight Lethwei Title
2014-08-31 Win Petchtae Tor.Maxmuaythai Ultimate International Letwhay Challenge Fight 2014 Singapore KO 2
2014-07-06 Win Weerapol One on One Big Fight Yangon, Myanmar KO 3
2014-05-18 Win Petchtae Tor.Maxmuaythai International Lethwei Challenge Fights Yangon, Myanmar KO 5
2014-04-06 Draw Saw Yan Paing Myaw Sin Island Challenge Fights Yangon, Myanmar Draw 5
2014-03-26 Win Pravit Aor.Piriyapinyo Taung Pa Village Challenge Fights Mudon Township, Myanmar KO 2
2014 Draw Pravit Aor.Piriyapinyo International Challenge Fights Myanmar Draw 5
2014-03-09 Win Rajchasie Pumphanmuang Hla Ka Zaing Village International Challenge Fights Kyaikmaraw Township, Myanmar KO 3
2014 Win Thanwalek Chaiminburi International Lethwei Challenge Fights Thaung Pyin, Myanmar KO 1
2013-09-21 Draw Naoki Samukawa Myanmar vs. Japan Challenge Fight Yangon, Myanmar Draw 5
2013-05-12 Draw Soe Lin Oo Lethwei Challenge Fights Yangon, Myanmar Draw 5
2013-03 Draw Soe Lin Oo Lethwei Challenge Fights Myanmar Draw 5
2013 Win Tun Tun Lethwei Challenge Fights Ye Township, Myanmar KO 3
2013 Win Yodkunkrai Por.Wiriya International Lethwei Challenge Fights Myanmar KO 1
2013 Win Saw Yan Paing Lethwei Challenge Fights Myanmar KO 2
2013-02-12 Draw Dawna Aung Taungoo City Challenge Fights Taungoo, Myanmar Draw 5
2013-02-05 Win Yodtang Win Sein Taw Ya 2013 Mudon Township, Myanmar KO 1
2013-01-20 Win Poonpetch Myanmar vs. Thailand Letwhay Competition Yangon, Myanmar KO 1
2013-01-06 Win Felix Dagon Shwe Aung Lan 2013 Yangon, Myanmar KO 2
2012-12-14 Win Saw Ga Pa Rae Hmu Lethwei Challenge Fights Mandalay, Myanmar KO 3
2012-11-25 Draw Tha Pyay Nyo Lethwei Challenge Fights Yangon, Myanmar Draw 5
2012 Win Pettaporn International Lethwei Challenge Fights Myanmar KO
2012 Draw Tha Pyay Nyo Lethwei Challenge Fights Lamaing, Ye, Myanmar Draw 5
2012-02 Draw Win Tin Thaung Pyin Challenge Fights Ye Township, Myanmar Draw 5
2011-07-03 Win Shwe Thein Aung Myanmar vs. Thailand Challenge Fights (Day 2) Mandalay, Myanmar KO 1
2011-03-15 Win Saw Gaw Mu Do Thanbyuzayat Challenge Fights Thanbyuzayat Township, Myanmar KO 2
2011 Draw Soe Lin Oo Lethwei Challenge Fights Myanmar Draw 5
2011 Draw Too Too Lethwei Challenge Fights Myanmar Draw 5
2011 Draw Kyaw Ye Khaung Royal Club Challenge Fights Mawlamyine, Myanmar Draw 4
2010 Loss Nay Salaing Aung Lan Lu Pwe Tournament Myanmar TKO 3
7 wins,3losses,0draws
2013-12-22 Win Indra Ashari Jaya 2013 Southeast Asian Games Naypyidaw, Myanmar KO21:59
2013-12-19 Win Quoc Hung Truong 2013 Southeast Asian Games Naypyidaw, Myanmar Decision
2013-07-14 Loss Youssef Boughanem Thai Fight Kard Chuek Bangkok, Thailand Decision39:00
2013-07-01 Loss Zhang Jinglei 2013 Asian Indoor and Martial Arts Games Incheon, South Korea Decision
2013-06-30 Win Kim Min-Su 2013 Asian Indoor and Martial Arts Games Incheon, South Korea RSCB
2013-06-15 Win Dimitri Masson Thai Fight Kard Chuek Bangkok, Thailand Decision39:00
2013-06-01 Win Amadou Ba Thai Fight Kard Chuek Bangkok, Thailand TKO (Injury) 1 1:25
2013-03-05 Win Yan Gyi Aung Pre-SEA Games Union Cup Naypyidaw, Myanmar
Loss 0–1 Daryl Lokuku Ippon (Ground and pound) Ganryujima Way of the Samurai Koukai Senshou Final 02016-၀၇-31-July 31, 2016 1 2:03 Ariake, Tokyo, Japan
↑ Kyaw Tun (17 April 2015)။ ဘက်တူရင် လူမရွေးတဲ့ ထွန်းထွန်းမင်း (The people side with Tun)။ 18 November 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Kyaw Zin Hlaing။ "Bring on the world"၊ Myanmar Times၊ 19 January 2016။ 30 March 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "'မွေ'အားကစားနည်းမှ ရရှိခဲ့သည့် ရွှေတံဆိပ် (၂)ခုသည် (p၉)"၊ Myanma Alinn Daily၊ 10 August 2012။
↑ "မြန်မာလက်ဝှေ့အဖွဲ့ ပြည်ပထွက်ခွာ (p၁၀)"၊ Myanma Alinn Daily၊ 18 June 2012။
↑ Hlaing၊ Kyaw Zin။ "ဝင်းထွန်းရှုံးပွဲတွေ့ပြီး ထွန်းထွန်းမင်းနှင့် စိုးလင်းဦးတို့ သရေရလဒ်သာထွက်ခဲ့"၊ Myanmar Times၊ 16 May 2013။
↑ Hlaing၊ Kyaw Zin။ "Russian fighters meet the real deal in Myanmar"၊ Myanmar Times၊ 29 March 2016။
↑ Linn၊ Kyaw Ye။ "Ethnic Muslim fighter eyes Myanmar’s kickboxing crown"၊ Anadolu Agency၊ 30 November 2018။
↑ Tun၊ Kyaw Myo။ "ဘက်တူရင် လူမရွေးတဲ့ ထွန်းထွန်းမင်း"၊ The Irrawaddy Burmese Edition၊ 1 May 2015။
↑ Foreigners drawn to Myanmar's bone-crunching kickboxing (25 December 2015)။
↑ Arthur၊ Richard။ "Lethwei star Tun Tun Min’s road to redemption"၊ Fox Sports Asia၊ 15 December 2018။
↑ Tun၊ Kyaw Myo (9 April 2015)။ ဘက်တူရင် လူမရွေးတဲ့ ထွန်းထွန်းမင်း။
↑ Giordano၊ Vincent (2015)။ U Ye Thwe။
↑ Hlaing၊ Kyaw Zin။ "Japanese challengers prove worthy foes"၊ Myanmar Times၊ 29 September 2013။
↑ Kyaw Zin Hlaing and Matt Roebuck။ "Friendship before fights"၊ Myanmar Times၊ 16 March 2016။ 30 March 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Hlaing၊ Kyaw Zin။ "Two Two eyes Golden Belt"၊ Myanmar Times၊ 28 July 2014။
↑ ၁၆.၀ ၁၆.၁ Hlaing၊ Kyaw Zin။ "စောငမန်းကို အလဲထိုးအနိုင်ယူပြီး မြန်မာပြည် ချန်ပီယံဖြစ်လာတဲ့ ထွန်းထွန်းမင်း"၊ Myanmar Times၊ 25 September 2014။
↑ Soe၊ Than Naing။ "National champ wins top lethwei award"၊ Myanmar Times၊ 14 December 2015။
↑ Hlaing၊ Kyaw Zin။ "ထွန်းထွန်းမင်းနှင့် မွေထိုင်းဖိုက်တာ ထာနီလစ်တို့ ထိုးသတ်မည့် ရိုးရာလက်ဝှေ့ပွဲ ရန်ကုန်မြို့၌ ကျင်းပမည်"၊ Myanmar Times၊ 28 March 2019။
↑ Eaton၊ Matt။ "Rematch set for Dave Leduc and Tun Tun Min"၊ The Fight Nation၊ 15 October 2018။
↑ Couderette, Martial (2017). Lethwei; Myanmar Traditional Boxing. Lyon, France: Ginger Éditions, 163. ISBN 978-2-9562049-0-9။
↑ Hlaing၊ Zaw Zaw။ "ဂျပန်မလေးများ ဝိုင်းဝိုင်းလည်နေသည့် မြန်မာလက်ဝှေ့ကျော် ထွန်းထွန်းမင်း (ရုပ်သံ)."၊ DVB၊ 28 October 2016။
↑ "မြန်မာ့ရိုးရာအားကစား (p၂၁)"၊ Myanma Alinn Daily၊ 14 August 2016။
↑ "မြန်မာ့ရိုးရာအားကစား (p၁၉)"၊ Myanma Alinn Sunday Issue၊ 13 March 2016။
↑ Hlaing၊ Kyaw Zin။ "Another first round win for Tun Tun Min"၊ Myanmar Times၊5April 2016။
↑ Gallio, Giovanni (2017). Athleta Magazine; Imagery of Sporting Culture. Verona, Italy: Rise Up Studio, 71, 73။
↑ Nadales, Alvaro Fierro (2018). JOIA Magazine #52. Santiago, Chile: Joia Studio, 16, 17။
↑ Hlaing၊ Kyaw Zin။ "Golden belt finally up for grabs"၊ Myanmar Times၊6January 2016။
↑ Hlaing၊ Kyaw Zin။ "Question answered"၊ Myanmar Times၊ 13 October 2015။
↑ Hlaing၊ Kyaw Zin။ "Friendship leads to fight"၊ Myanmar Times၊ 25 August 2015။
↑ Hlaing၊ Kyaw Zin (24 April 2015)။ Washington to kick back။
↑ Hlaing၊ Kyaw Zin။ "မြန်မာ-ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံ ရိုးရာလက်ဝှေ့စိန်ခေါ်ပွဲ ကျင်းပမည်"၊ Myanmar Times၊ 16 May 2014။
↑ Hlaing၊ Kyaw Zin။ "ပရိသတ်တွေကျေနပ်ခဲ့သည့် မြန်မာ-ထိုင်း လက်ဝှေ့စိန်ခေါ်ပွဲ"၊ Myanmar Times၊ 22 May 2014။
↑ Hlaing၊ Kyaw Zin။ "သရေရလဒ်တွေနဲ့ များပြားခဲ့တဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာလက်ဝှေ့စိန်ခေါ်ပွဲ"၊ Myanmar Times၊ 11 April 2014။
↑ Hlaing၊ Kyaw Zin (29 September 2013)။ Japanese challengers prove worthy foes။
↑ Hlaing၊ Kyaw Zin။ "ထိတ်ထိတ်ကြဲပွဲစဉ်များပါဝင်မည့် ရိုးရာလက်ဝှေ့စိန်ခေါ်ပွဲကြီး ကျင်းပမည်"၊ Myanmar Times၊9May 2013။
↑ Hae Bi၊ Sein။ "ထွန်းထွန်းမင်းနဲ့ ဒေါနအောင်ရဲ့ ပြည်ထောင်စုနေ့ တောင်ငူပွဲ"၊ Myanmar Times၊7February 2013။
↑ Hlaing၊ Kyaw Zin။ "မြန်မာလက်ဝှေ့ကျော်များ အနိုင်ရခဲ့သည့် ရိုးရာလက်ဝှေ့စိန်ခေါ်ပွဲ"၊ Myanmar Times၊ 24 January 2013။
↑ "ဒဂုံရွှေအောင်လံလက်ဝှေ့ပြိုင်ပွဲ တွေ့မရှောင် ပထမတန်းဒဂုံရွှေအောင်လံ ဖလားရရှိ (p၁၀)"၊ Myanma Alinn Daily၊7January 2013။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ထွန်းထွန်းမင်း&oldid=494549" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၀၅:၄၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။